ပင်လယ်ကွေ့နှင့်ဒူဘိုင်း 2020 အလုပ်များ - အလုပ်ရှာဖွေရေး၊ ခရီးသွားခြင်း၊ ဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်းနှင့်ဗီဇာပေးခြင်း】
ယူအေအီးနဲ့ JOBPRO.ae ၌သင်တို့၏ DREAM အလုပ်ရှာ
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူဒူဘိုင်း 2020 အတွက်ဂျော့ဘ်။ ကျနော်တို့ပင်လယ်ကွေ့ဒေသအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများရန်ကူညီပေးနေလက်ပေးခြင်းနေကြသည်။ အခုတော့ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အယူအေအီး၌အကြှနျုပျတို့၏စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီနှင့်အတူတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့စော်ဘွားအတွက်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုအများကြီးပေး။ မှတ်မိဖို့ပထမဦးဆုံးအရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းဖို့မည်သူမဆိုများအတွက်တာဝန်ခံအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အရှေ့အလယ်ပိုင်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ပြည်ပမှာအနေဖြင့်အလုပ်ရှာဖွေသူများအားမရနေကြတယ်လို့ပဲ။
ကျနော်တို့ကအမြဲရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်အသစ်တခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်နိုင်ရန်အလုပ်ရှာဖွေသူများကူညီပေးနေ။ ထို့အပွငျကြှနျုပျတို့ကုမ်ပဏီဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက် operating ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစုဆောင်းမှုဈေးကွက်ထဲမှာထိပ်ပိုင်း-rated န်ဆောင်မှုများပေး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒူဘိုင်းအလုပ်က်ဘ်ဆိုက် လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ပြီးသားထက်ပို 1 သန်းဧည့်သည်များကူညီပေးသည်။ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုဆိုတော့ဒါဟာ 2020 နှင့် 2021 အတွက်အထူးသဖြင့်ပြုပါရန်လွယ်ကူသောအရာမဟုတ်ပါကြောင့်ဖြစ်သည်။
တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီအများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် လူကြိုက်များယူအေအီးအလုပ် Finder။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုကအိန္ဒိယပြည်တော်ပြန်များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနှင့်အတူပေး အလုပ်အကိုင်အအကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်။ နှင့်သင်တန်း, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအလုပ်နေရာလွတ်ကိုရှာဖွေတဲ့မြန်လမ်းများအတွက်ကြီးမားတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေ၏။
ကျနော်တို့ No.1 ကုမ္ပဏီဖြစ်ရည်မှန်းထားပါသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအသစ်ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားများ။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကိုကျော်သူကသက်သေပြနိုင်ဖို့ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေ။ ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီရန်သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တင်ခြင်းရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရာတွင်များစွာထိရောက်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ထိုသို့အကြီးမြတ်ဆုံးအရာတစျခုဖွစျသညျ သငျသညျအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကိုယ်အဘို့ပွုနိုငျ။ ဒါဟာယူအေအီးသို့မဟုတ်ကာတာနိုင်ငံအသစ်အလုပ်အတူတက်ပဲရှိတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အနာဂတ်နှင့်သင့်မိသားစုအနာဂတ်လုံခြုံလိမ့်မည်။ ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များ 2020 နှင့် 2021 ရုံသင်တို့အဘို့ထောင့်လှည့်ပတ်နေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူအညီဖြင့်သင်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှာပါလိမ့်မယ်လို့ပဲ။
ကျနော်တို့ကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်ဒူဘိုင်းဂျော့ 2020 ပေးကြသည်!
ဒူဘိုင်းတွင်အများအပြားစုဆောင်းက်ဘ်ဆိုက်များအတွင်း။ ကျနော်တို့ကျိန်းသေထိပ်ဆုံး rated နှင့်အမြန်ဆုံးအလုပ်လုပ်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်သတင်းအချက်အလက်ပေးစွမ်းသည်။ ဒီတော့တကယ်တော့, သငျသညျယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မှရှာကြသည်လျှင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအရှေ့အလယ်ပိုင်းအလုပ်အကိုင်များကိုဤနေရာတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, သင်ဒူဘိုင်းစီးတီးအကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာ, ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသို့မဟုတ်ဖြစ်စေလမ်းရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ထိုအသေချာလွှတ်တင်ခြင်းကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းများအတွက် 2020 အသစ်ကနေရာလွတ်အတွက်ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအကူအညီနဲ့ဖြစ်ပျက်သမျှကိုသင့်၏အောင်မြင်မှုကိုရောက်ရှိ ရာထူး တိုင်းခြေလှမ်းပါ။ သင်တစ်ဦးအလုပ်သစ်ရှာဖွေသူဖြစ်ကြောင်း, ဒါမှမဟုတ်ရုံစတင်ဖွစျစေ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အ. တကယ်တော့သင်ဟာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ၀ န်ထမ်းတစ်ယောက်ပါ။ ထိုအသင်လိုအပ်ပါတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစျေးကွက်တင်ပါ စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု။ သင်ကျိန်းသေနိုင်ပါတယ် အဆိုပါအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ဖိုးသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေ.
အပေါ်နေ့ကလှုပ်ရှားမှုများမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းနေ့က ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ် နှင့် ်ထမ်းခေါ်ယူမှုအဖွဲ့များ။ သန်းပေါင်းများစွာကိုကူညီပေးပါ အလုပ်ရှာဖွေသူများအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်တစ်ခုရဖို့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကထွက်ရှိသင့်အမည်ရတဲ့နှင့်ခိုင်မာသောစီးပွားရေးကိုရှေ့တော်မှောက်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်ဖို့ပါပဲ။ သငျသညျဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီနှင့်အတူရနိုင်ကြောင်းအလုပ်လှုပ်ရှားမှုများ၏ရည်ရွယ်ချက်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ယူပါလိမ့်မယ် အလုပ်ရှာဖွေနေ လာမယ့်အဆင့်အထိ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ငှားရမ်းအဖွဲ့အမြဲသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်စျေးကွက်နှင့်သင့်ကိုကူညီမယ့်နည်းလမ်းရှာ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရ။ ဒါကြောင့်ဒူဘိုင်းဂျော့ 2020 ယခုနိုင်ငံခြားပညာရှင်များများအတွက်ရရှိနိုင်ပါဖြစ်လာသည်။
ကောင်းပြီ, အောက်ပါနှစ်များတွင်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ ပင်လယ်ကွေ့တွင်ကုမ္ပဏီများသည်။ အသစ်ကအလားအလာအလုပ်ရှာဖွေသူများကိုငှားရမ်းရန်ရှာနေ။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအသစ်ကအလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ရှင်များ၏ Forbes မဂ္ဂဇင်း 500 စာရင်းထဲကအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများသည်ယူအေအီးအတွက်ငှားရမ်းကြသည်။ ဒါကြောင့်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီဒီမှာပါ 2020 သင်သည်ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များရှာနေလျှင်။ နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှလူများအားလုံးနီးပါးမျိုးများအတွက်အလုပ်အကိုင်များပေးပါသည်။ ဥပမာအားကို manual အလုပျသမားအဖြစ်ပညာတတ်မန်နေဂျာ။ ဒါကြောင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီသုံးပြီးကအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်အဖြစ်ဒူဘိုင်း 2021 အတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေတာတစ်အများကြီးပိုကောင်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သငျသညျရာပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်ပင်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိပါတယ်သတိရရမယ် ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီများ နှင့်အဘူဒါဘီ။ အဲဒီတော့ရှိတယ် အဘယ်သူမျှမကတကယ်တော့ဆင်ခြေသင်သည်သင်၏အလုပ်ရှာဖွေအတွက်ပျက်ကွက်လျှင်။ သင်တိုးမြှင့်တစ်ဦးသင့်လျော်သောလမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီသုံးပါလိမ့်မယ်ဆိုရင်တောင် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖှ၏အခွင့်အလမ်း 80% ကျော်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာအသင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဧရိယာ၏မြို့တော်ချန်ထားကြသူကတခြားပြည်တော်ပြန်နှင့်အတူချိတ်ဆက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အကြောင်းမူကား,
နေ့တိုင်းကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင်အသစ်သောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေအတွက်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းကလူထောင်ပေါင်းများစွာ၏တီဗီပေါ်မှာငါတို့သတင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်ကိုကြည့်ရှုသည်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်ကျိန်းသေ, ကျွန်တော်အပတ်တိုင်းအသစ်ကစီမံကိန်းကိုရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူကြီးထွားလာနေကြတယ် အထူးသဖြင့်အများကြီးပိုပြီးအလုပ်အကိုင်များရုံးတလျှောက်လာကြလိမ့်မည်ဘယ်မှာ 2020 မီ။
ဒူဘိုင်းဂျော့ 2020 - 2021 နိုင်ငံခြားသားများများအတွက်ရရှိနိုင်ပါဖြစ်လာသည်။ အထူးသဖြင့်ပင်လယ်ကွေ့ဒေသကြီးအတွင်းရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်။ ဒါကြောင့်သင်ကယူအေအီးအတွက်ထိပ်တန်း rated ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားငါတို့သည်2အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများကိုရှိပါတယ်။ အလုပ်ရှာဖွေရေးယူအေအီးအတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေတာတွေနဲ့ကူညီပေးသည်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီလူမျိုးအပေါင်းတို့ကြင်နာကျော်ကြားကုမ္ပဏီတခုဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ယခုအထိကျွန်တော်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာအလွန်မြင့်မားသက်ရောက်မှုရှိခြင်းနေကြသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ clients များအွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုအလွန်ကောင်းသောအမြင်အားမရ။
ကျနော်တို့အားမရနေကြတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်ပွငျအလုပျအတှကျသာအင်ဒီးယန်းများနှင့်ပါကစ္စတန်။ လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှလူအားမရကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီ။ ဒီတော့ဥပမာ, ကျနော်တို့တောင်အာဖရိကနဲ့အင်ဒိုနီးရှားကနေ clients များရှိခြင်းနေကြသည်။ ထိုမှတပါး, အီဂျစ်နဲ့တူရကီ။ ဒါကြောင့်, သင်မြင်သည်အတိုင်း ကျနော်တို့ကအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပျသမားအားမရနေကြတယ် လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှ။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ, ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်အလုပ်အကိုင်များကိုစီမံခန့်ခွဲအရှေ့အလယ်ပိုင်းကနေပေးထားပါတယ်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ကျနော်တို့ဆော်ဒီအာရေဗျတွင်လုပ်ကိုင်နေကြသည်, ကာတာနိုင်ငံ နှင့်ကူဝိတ်။ ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီသင်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရတည်ဆောက်ကူညီပေးနေမျှော်လင့် အဆိုပါ GCC အတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေး။
ထိုကဲ့သို့သောကူဝိတ်, ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအဖြစ်ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများ စီးပွားရေးကိုအလွန်အမင်းအစာရှောင်ခြင်းကြီးထွားလာနေပါတယ်။ သငျသညျရှိနေတဲ့အလုပ်အကိုင်အရချင်ပါတယ်လျှင်ဒီတော့သင်ဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့ချိုးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုအများကြီးရှိပါတယ်ရိုးရှင်းစွာအကြောင့်။ သငျသညျအိန္ဒိယသို့မဟုတ် Arabic အလုပ်ရှာဖွေသူအတွက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်အမှန်တကယ်အတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာကြံနေတယ်ဆိုရင် အာရပ်ကမ္ဘာကိုသင်အဘို့ကြီးစွာသော option တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီ, တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ကနေအလုပ်ရှာတွေ့မှအများကြီးပိုလွယ်သောအရပ်။ ဒါကြောင့်သင်နှင့်သင့်မိသားစုများအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်လတံ့သောအရာကိုစိတ်ကူးနိုငျကွောငျးအပေါ်အခြေခံထားပါသည်။ နိုင်ငံခြားလူအမျိုးမျိုးထံမှလူအများစုဟာပြည်ပမှာ destination သို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်တိုင်းပြည်ကနေ application တစ်ခုလုပ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်, အလုပ်ရှာဖွေသည်ဤလမ်းအတွက်အတော်လေးအောင်မြင်သောဖြစ်နိုင်သည်။
မကြာသေးမီကအိန္ဒိယကျွမ်းကျင်သူများယူနိုက်တက်ရှုရိစော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကိုပြောင်းရွှေ့နေကြပါတယ်။ အိန္ဒိယအစိုးရအသစ်ကမဟာဗျူဟာများနှင့်အတူတက်ရောက်လေပြီ။ ဥပမာ, E-ဗီဇာသူတို့နှင့်အတူကူညီခြင်း အစီအစဉ်နှင့်မသာ ဗီဇာလွယ်ကူသည်ကို process မှ နှင့်နေရာပြောင်းရွှေ့မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျောက်ပတ်သောအဆင့်တွင်ဖြစ်၏။ သို့သော်ထိန်းသိမ်းရန်ကူညီ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်အတွင်း၎င်း၏နိုင်ငံသားများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေး.
ယူအေအီးအတွက်န်ထမ်းများအတွက်ချုပ်ခရီးစဉ်တစ်ခုမှာ။ ဒါဟာပြည်အဖြစ်ကမ္ဘာကဖြတ်ပြီးကြီးမှူးမတ်နေသည် အားလုံးနယ်ပယ်များတွင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဘို့အခွင့်အလမ်းများ။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကံကြိုးစားပြီးနှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်တစ်ခုရသင့်ပါတယ်။
အဆိုပါနေရာပြောင်းရွှေ့၏အစအဦးဒူဘိုင်းမှအချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့တဲ့စတင်သည်ကတည်းက။ အင်ဒီးယန်းကျွမ်းကျင်သူများအွန်လိုင်းမှပလက်ဖောင်းမှာမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါသည် သူတို့အလုပ်အတွက်ယူအေအီးမှထွက်သွားမတိုင်မီအစိုးရက run.
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကယ့်ကိုသင်တို့သည်ငါတို့၏ပရီမီယံအဖွဲ့ဝင်တဦးတည်းဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ဦးတည်နေပါတယ်။ သင်တစ်ဦးအခြေခံအကောင့်မှရှေးခယျြနိုငျနှငျ့သငျလညျးပရီမီယံအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာနိုင်ပြီးကြောင်းပါလိမ့်မယ် သင်အလယ်တန်းအရှေ့နိုင်ငံများတွင်သစ်ကိုအခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေနေလျှင်တစ်ဦးတောက်ပစိတ်ကူး။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်ကူဝိတ်အတွက်ကာတာနိုင်ငံအလုပ်အကိုင်များသို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေနေပါသည်လျှင်။
သငျသညျကျိန်းသေသင့် သင်သည်သင်၏ပရိုဖိုင်းမှတ်ပုံတင်ရန်မည်သည့်အခါတန်ဖိုးအရ သငျတို့သအမြဲတမ်းကွဲပြားခြားနားသောလူမှုမီဒီယာဥပမာ, LinkedIn တို့သို့မဟုတ် Facebook စပရိုဖိုင်း post နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့နောက်ထပ်အများကြီးပဲ စုဆောင်းမှုအေးဂျ သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုနှင့်ကြောင်းကိုပေါက်ပြားတွေနဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မယ် သင်တစ်ဦးအလုပ်သစ်အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူပေးသွားမှာပါ ဘယ်မှာသင်ငါတို့သည်သင်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုပြသနိုင်ပြီး၏သင်တန်းသင့် hard ကပညာရေးပရိုဖိုင်းကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ကျနော်တို့မဆိုအခြားကုမ္ပဏီများထက်အတော်လေးကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ကျနော်တို့ဘာသာစကားများရာပေါင်းများစွာသို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီထားသောရိုးရှင်းစွာအကြောင့်။ ထိုပေးခြင်းခံခဲ့ရသည် ကျွမ်းကျင်သူများကလူ အဘယ်သူသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကိုအနေဖြင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ရှာဖွေနေကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့အင်ဒိုနီးရှား, အိန္ဒိယနှင့်ဖိလစ်ပိုင်အတွက်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖြစ်လာသည်။ ဒါကြောင့်သင်တွေ့နိုင်ပါသည်အဖြစ် Google မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီရှာဖွေနေကြသူလူပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဒူဘိုင်း၏မြှင့်တင်ရေးမှာအရမျးကောငျးတတွေဟာ ငါတို့သည်လူအရဘယ်လိုဖွင့်လို့ပဲ။ ကျနော်တို့ကတကယ်တော့သူတို့ကိုဖေါ်ပြခြင်းလူတွေကိုကူညီနေကြပါတယ် ဘယ်လောက်ကြီးမြတ်ကဒူဘိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများအလုပ် browsing နေကြတယ်ရိုးရှင်းစွာအရသောအခါ။ သူတို့ကအမှန်တကယ်ရှာနေ ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုများအတွက်။ စိတ်၌ဤအတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီအလုပ်အကိုင်များတစ်ဦးအဖြစ်မိမိကိုယျကိုနေရာချပေးဖို့စတင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ Facebook နှင့် Twitter ပေါ်တွင်ငါးကြယ်ပွပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရှိခြင်းနေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဖြစ်များစွာသောလူကကူညီရန်ဖြစ်ပါသည် ကျနော်တို့လုပ်နိုင်နှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိပင်စည် play အဖြစ်။ ဟုတ်ပါတယ်, ငါတို့သည်သင်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူလာကြလိမ့်မည်နှငျ့သငျကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအလုပ်ရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်ရှိခြင်းနေကြသည်။ ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ်မှာထိုင်ကြသူစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများအများကြီးဖြစ်ပါတယ် အသစ်တစ်ခုကယောဘရှာသူရှာနေက်ဘ်ဆိုက်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကယ့်ကိုမျှော်လင့်ကြောင်းနှင့်အတူဦးတည်နေသည် သင်တို့သည်ငါတို့၏ပရီမီယံအဖွဲ့ဝင်တဦးတည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်။ သင်တစ်ဦးအခြေခံအကောင့်မှရှေးခယျြနိုငျနှငျ့သငျလညျးပရီမီယံအဖွဲ့ဝင်တဦးဖွစျလာနိုငျနှငျ့သငျလျှင်တစ်ဦးတောက်ပစိတ်ကူးပါလိမ့်မယ် အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများတွင်သစ်ကိုအခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေနေ။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်ကူဝိတ်အတွက်ကာတာနိုင်ငံအလုပ်အကိုင်များသို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေနေပါသည်လျှင်။ သင်သည်သင်၏ပရိုဖိုင်းမှတ်ပုံတင်ရန်မည်ဖြစ်ပြီးသင်အမြဲဥပမာ, မတူညီသောလူမှုမီဒီယာသို့ LinkedIn တို့သို့မဟုတ် Facebook ကြောင့်ပရိုဖိုင်း post နိုငျသောအခါအသငျသညျကျိန်းသေတန်ဖိုးအရသင့်ပါတယ်။ ပြီးအများကြီးပိုစုဆောင်းမှုအေးဂျင့်သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်နှင့်လိမ့်မည်ကြောင်းပေါက်ပြားနှင့်အတူမယ်လို့ သင်တစ်ဦးအလုပ်သစ်အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူပေး ဘယ်မှာသင်ငါတို့သည်သင်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုပြသနိုင်ပြီး၏သင်တန်းသင့် hard ကပညာရေးပရိုဖိုင်းကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ဒူဘိုင်းသို့သော်ကြောင့်အလုပ်အကိုင်ရရှိရန်အတော်လေးပူပြင်းတဲ့ Market ကဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးအတွေ့အကြုံနှင့်သင်တန်းရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့သက်သေပြစာရွက်စာတမ်းများအများကြီးရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်ပင်စဉ်းစားခင်ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျထိုကောင်းမွန်သောပညာရေးရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေတာ။ ယူအေအီးကတခြားနိုင်ငံတွေထက်မကွဲပြားလည်းမရှိ။ ကျနော်တို့သာအလွန်အမင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကြုံတွေ့ကြသူအလွန်ကောင်းစွာပညာတတ်လူတို့အဘို့ရှာကြ၏။
သငျသညျအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာရှာဖွေနေအကြောင်းကိုအလေးအနက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်။ သငျသညျကျိန်းသေဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီလူမှုရေးကွန်ယက်န်ဆောင်မှုများကြည့်ကြသင့်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တကယ့်အကောင်းကုမ္ပဏီ p များမှာလိုအပ်သော roviding အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့ဖြစ်၏သူသည် အဘယ်သူသည် 2020 အတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ရှာဖွေနေကြသည်။ သင်မြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ်ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြောတရာကျော်က မွမ်ဘိုင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ်တယ်အပေါ်တထောင်အလုပ်ရှာဖွေသူများ။ နှင့်သင်တန်း၏ငါတို့သည်သူတို့အပေါငျးတို့သဖုံးကွယ်နိုင်ခဲ့မဟုတ်ပေမယ့်ကျနော်တို့ကအောက်ပါနှစ်အတွင်းဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်တနင်္ဂနွေကဲ့သို့များစွာသောလူနေရာဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။
အဆင်ပြေသင်သည်ဒူဘိုင်းအတွက်ဖြစ်ရပြီဘယ်တော့မှလျှင်။ သင်နောက်တော်သို့လိုက်ကြပြီအနည်းငယ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်သိကျွမ်းရန်လိုအပ်သည်။ ဒူဘိုင်းအတွက်ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်သောက်အရက်ကိုအသုံးပြုနေသူကိုလူတွေကြိုက်နှစ်သက်ကြပါဘူး။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုရှာရီယာဥပဒေအောက်မှာရှိပါတယ်။ ငါတို့သည်သို့သော်ကျနော်တို့ထောက်ပံ့နေကြသည်ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများလေးစားကြသည်မွတ်စလင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်သင်တို့သည်ငါတို့၏တိုင်းပြည်တလျှောက်ကြသောအခါ သငျတို့သဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင် start သွား။ သင်တို့သည်နောက်ခြွင်းချက်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်အိပ်မက်ဤငါ့ကိုလှည့်ပတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု၌နေသည်ယုံကြည်နေကြသည် အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကတကယ်တော့အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာတည်ဆောက်ခြင်း။
ဟုတ်ပါတယ်, ယေဘုယျအားဖြင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏တိုင်းပြည်ကူးလာနိုင်ပြီးသင်စိတ်ဝင်စားကျွမ်းကျင်မှုတွေအများကြီးသင်ယူနိုင်ပါတယ်, စကားပြော။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကအမြဲလူတွေကိုပညာပေးမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်သူတို့အတွေ့အကြုံကိုအတွက်ဘားမြှင့်ကူညီကြသည်။ ဒီတော့နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ကျော်လာအဖြစ်စံအလုပ်သမားအဖြစ်စတင်ကြောင်းပြည်တော်ပြန်များ၏အများစုရဲ့ပေသည်။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျစတငျမညျသညျ့အခါအတှေ့အကွုံရတဲ့ သငျသညျပိုကောင်းအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုရှာတှေ့နိုငျ မြို့လယ်၌တည်၏။ သို့သော်ဤလုပ်ဖို့သင်သည်ဒူဘိုင်းမြို့မှာရှိတဲ့အတှေ့အကွုံအစိုင်အခဲအနှစ်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းအမြန်ဆုံး-ကြီးထွားလာထိပ်တန်း 100 Forbes မဂ္ဂဇင်းကုမ္ပဏီများထဲကတစ်ခုရှိပါတယ်။ နှင့် ကျနော်တို့ကအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာထိပ် 10 မှာဖြစ်ကြောင်းနှင့်တစ်အချက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသူလူများ၏တစ်ဦးကအများစုရှာနေကြသူသင်တို့ကဲ့သို့ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြသည် ပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းများနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုကိုကူညီပိုကောင်းလစာများအတွက်။
အဘယ်သူမျှမကိစ္စကိုသင်နွားခဲ့ကြသည်သောအရာကို ကျနော်တို့နေဆဲထိပ်တန်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူတိုင်းပြည်အထပ်ထပ်ကြီးထွားလာနေကြတယ်။ သင်သည်များစွာသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင်အလုပ်အကိုင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားမီဒီယာနှင့်စျေးကွက်သည်။ ထိုမှတပါး, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု, ပညာရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ။ ကျနော်တို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပတ်ပတ်လည်ကလူရာပေါင်းများစွာအဘို့ဤအလုပ် site ကိုဖန်တီးနေကြတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်စိတ်ဝင်စားဖို့သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်နှင့် အလုပ်ရှာဖွေလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားထောကျပံ့ပေး။
ထို့အပြင်သင့်ရဲ့စည်းစိမ်ကိုတည်ဆောက်ရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်တကယ်နိုင်သည့်နေရာများအများကြီးကြောင်းကိုကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ အလွန်ကျေနပ်ပျော်ရွှင်သူတစ်ဦးဖြစ်လာ။ ဒူဘိုင်းမြို့အခွင့်အလမ်းများခေါင်းဆောင်မှုနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့မျိုးတွေအများကြီးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်ရုံရန်မလိုပါ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏မြို့တော်မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့တဦးတည်းအတွက်အလုပ်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းကိုရွေးချယ်ကာအောင်မြင်သောစီးပွားရေးသမားဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ, သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အတှေ့လိမျ့မညျမသာ။ သင်သည်သင်၏အိပ်မက်လက်တွေ့ဘဝမှလာစေရန်အခွင့်အလမ်းကိုရပါလိမ့်မယ်။ နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီသင်သည်သင်၏အသက်တာ၌အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းရဖို့ကူညီပေးပါမည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိုရမ်များအပေါ်တစ်ဦးကြည့်ရှိသည်နှင့် ပင်လယ်ကွေ့ဒေသမှာရှိတဲ့အခြားလူများထံသို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်မိတ်ဆက်။ ထိုသင်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ်သင်ကယောက်ျားတွေအတူတကွစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစေမည်မျှော်လင့်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားစျေးကွက်အတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာကြသည်သောသူအပေါင်းတို့ကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့ပင်လယ်ကွေ့ဒေသအတွက်အတွေ့အကြုံထက်ပို 22 နှစ်ပေါင်းရှိသည်။ ကျနော်တို့ 2009 ကတည်းကယူအေအီးစျေးကွက်အတွက်ဝန်ထမ်းစုဆောင်းနေကြသည်။ နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အာရပ်ဈေးကွက်ထဲမှာစုဆောင်းရေးအတွက်အတွေ့အကြုံကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာရှိခြင်း, စကားပြော။ ကျွန်တော်တို့ကိုအာရဗီစီးပွားရေးလောကအတွင်းတွင်ကျယ်စွာငှားရမ်းထိပ် 10 ၏တဦးတည်းကိုမှန်ကန်စေသည်။ အတွေ့အကြုံကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်ပေါင်းများစွာ, ဒါဟာအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ဖို့လူထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကူညီပေးခဲ့တယ်။
ဒီနှစ်, ကျနော်တို့ပင်လယ်ကွေ့အလုပ်ဈေးကွက်ဝင်နေကြသည်။ ကျနော်တို့ကျွမ်းကျင်သူများဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ကိုကူညီပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတစ်ဦးကောင်းမွန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ငယ်ရွယ်ကူညီပေးသည် ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်မြင့်မားသောအဆင့်မှာအလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မှစီမံခန့်ခွဲသူကိုကျွမ်းကျင်သူများ။ သင်က od အတွေ့အကြုံအပေါ်မူတည်မျှော်လင့်ထားကြောင်းအဆိုပါလစဉ်လစာ။ ဟုတ်ပါတယ်, တစ်စုံတစ်ဦးကိုဒူဘိုင်း၌ရှိ၏မယ်ဆိုရင်အများကြီးပို dirhams စေမည်။
ထိုအဒါဟာဆုတ်ခွာတစ်ခုလုံးကိုအကောင့်အကျိုးသက်ရောက်ပါလိမ့်မည်သိရကြလိမ့်မည်။ ထိုအဟုတ်ပါတယ်, အခွန်နှင့်ပင်စင်ပံ့ပိုးမှုများကိုမရှိဘဲ။ ဟုတ်ကဲ့, ဒူဘိုင်းနေဆဲအခွန်-အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမ်းမရိတ်၌တည်၏။ သငျသညျအလုပ်အကိုင်များနှင့်ဆက်စပ်သောပင်အားကစားကားများရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ထိုမှတပါး, ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီ, သူတို့သည် Ferrari အတွက် Uber drivers တွေကိုဖြစ်ကြသည်။ နှင့်အညီ, သင်တန်း၏, အလုပ်ရှင်များကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုငွေကြေး။ နှင့်ကလေးများအတွက်သီးသန့်ပညာရေးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည် !.
ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ဒေသကြီး | အဆိုပါစော်ဘွားများပြည်ထောင်စု
ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့အစဉ်အဆက်အလုပ်မလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာများ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ သငျသညျလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်မသာ ထိုကဲ့သို့သောဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အအဖြစ်အံ့သြဖွယ်အခွင့်အလမ်းများရဒါပေမယ့်သင်ကကျိန်းသေကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိအလုပ်လုပ်ရန်တစ်ခု option ကိုရှိသည်မယ်လို့သူတို့ကိုအများစုဖြစ်ကြသည် ဥပမာအားဖြင့်ပိုလန်များအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးများထဲမှ။ ဘာရိန်း, အီရတ်, ကူဝိတ်, အိုမန်, ကာတာ, ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု (ယူအေအီး) ။ ဤအသောနေရာများအားလုံးအစဉ်အဆက်အကြီးမြတ်ဆုံးနေရာ အလုပ်အတွက်တစ်စီတန်းသည်။
သငျသညျအဘူဒါဘီသို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အဘို့ရှာကြသည်လျှင်သင်အထူးသဖြင့်ညာဘက်ကိုလာကြပြီ။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကုမ္ပဏီကိုသူဝယ်သင်တို့ဆီသို့မယ်လို့တည်းခိုခဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌ကြီးစွာသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုပါစေ။ သို့သော်ကျနော်တို့ကယူအေအီးမှကန့်သတ်မရှိကြပေ။ ဒါကြောင့်သင်အနေဖြင့်အခြားလူများနှင့်အတူချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့အလုပ်ရှာနေမယ်ဆိုရင် ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ဒေသသို့။ နှင့် ကျိန်းသေသင့်ရဲ့အိပ်မက်တွေကိုပွညျ့စုံလာစေပါသည်။
ကျနော်တို့စော်ဘွားအတွက်စုဆောင်းမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှစ်ပေါင်းများစွာသတိပြုမိပါပွီ။ ထို နီးပါးဘယ်နိုင်ငံနဲ့မဆိုစော်ဘွားအတွက်အလုပ်အတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောအင်ဒိုနီးရှားနှင့်ပိုလန်သောကြောင့်နိုင်ငံ၏နယ်နိမိတ်ပြင်ပတွင်။ ထမ်းဘိုးတို့ကိုသတ္တိရှိရှိပြည်ပမှာသွားနေကြသည်။ ငါဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်သစ်ကိုရှာဖွေဎအမိန့်။ ယူအေအီးကျွမ်းကျင်သူများအဘို့များစွာသောအမြင်များပေးထားပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်အုပ်စုများနှင့်အတွေ့အကြုံပါ။
စော်ဘွားကူးလာသူကိုလူတွေတစ်ဦးကိုစာရေးတံပြည်ပမှာစကားလုံးမှတန်ဖိုးထားပြီ။ ထိုကဲ့သို့သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအဖြစ်အထူးသဖြင့်အရပ်တွင်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ဒူဘိုင်းရဲ့လူကျွမ်းကျင်သူများသူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်တန်ဖိုးထားကြပါတယ်။ တချို့ကကြိမ်ဒူဘိုင်းအလုပ်ရှင်များအလွန်အကျွံပေးဆောင်နေကြ။ သငျသညျဆုကြေးငွေအပိုနာရီနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သော overpaid အဖြစ်အလုပ်ဈေးကွက်အပေါ်ကမ်းလှမ်းမှုတွေအများကြီးရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီနိုင်ငံခြားအလုပ်သမား tools များ၏ကျယ်ပြန့ကမ်းလှမ်း ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များရှာဖွေ။ လူအတော်များများဆုံးဖြတ် ၎င်းတို့၏မိသားစုများနှင့်အတူလိုက်နှင့်အသစ် Arabic အဘိဓါန်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ start ရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအလုပ်အလုပ်ရှင်များမှန်ထမ်းများနှင့်ရေရှည် Co-စစ်ဆင်ရေးမှကမ်းလှမ်းသက်သေပြခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုကမ်းလှမ်းမှုကို check လုပ်ထားသည်။ ဒါကြောင့်ပြည်နယ်အဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြောင်းမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီသာသက်သေအလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုကမ်းလှမ်း။ ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးအလုပ်စော်ဘွားအတွက်ကမ်းလှမ်းရှာတွေ့ရိုးစွန်းဒေသများမှ, အင်ဒီးယန်း, ပါကစ္စတန်နှင့်အင်ဒိုနီးရှားကူညီပေးသည်။ အမြဲတမ်းသူတို့ရဲ့စုံလင်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဦးစားပေး fit ဖို့ကြိုးစားနေ။ တစ်ဦးချင်းစီကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းဓြှု အကြီးတန်းငှားရမ်းမန်နေဂျာသည်။ ပြီးတော့သင့်လျော်သောကုမ္ပဏီများအဖို့စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, သငျသညျအဘူဒါဘီလည်းကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ တိုင်းအလုပ်နှင့်အလုပ်ရှင် check လုပ်ထားနှင့်အတည် ပြု. နေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်မရကူညီဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်စီမံခန့်ခွဲမှုသတို့သားအဘို့ကြီးစွာသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်တို့ရှာဖွေနေပါတယ် လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာလုံးကျော်ကနေအလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများများအတွက်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုသငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုအမှန်တကယ်ဒူဘိုင်းအတွက်နှစ်ပေါင်းစုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်လုပ်နေတာပြီအဘယ်အရာကိုနည်းနည်းပါတယ် browse ကြကုန်အံ့။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအမှန်တကယ်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့အခြေစိုက်ခဲ့သည်။ ပြီးတော့ကတည်းက ငါတို့သည်ဤလောကန်းကျင်တော်တော်များများသောအရပ်တို့ကိုအဘို့စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျနော်တို့အိန္ဒိယကနေနှင့်ပါကစ္စတန်ကနေလူတွေယူပြီးတော့ကျနော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒူဘိုင်းမြို့ကသူတို့ကိုကျော်ပေးပို့ဖို့စီမံခန့်ခွဲခဲ့ကြရတယ်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာစစ်ဆင်ရေး၏ပထမဦးဆုံး3နှစ်များတွင်။ ကျနော်တို့သင့်လျော်တဲ့လူတွေရဖို့နည်းနည်းရုန်းကန်နေနှင့်သင်တန်း၏ပြီ နှင့်အတူရဖို့သင့်လျော်သောစီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ။ ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိကျွန်တော်အလွန်များ၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာလူကြိုက်များကုမ္ပဏီများမှ.
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ထိုကဲ့သို့သောမန်နေဂျာရဲ့ဒါရိုက်တာနှင့်ရုံးလုပ်သားများအဖြစ်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူလူတွေကိုကူညီနေကြပါတယ်။ သို့သျောလညျး သငျသညျကျိန်းသေသင့်အကောင့်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်သင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်အပတ်တိုင်းအသစ်သောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အရာပေါင်းများစွာကမ်းလှမ်းနေသည် နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီရန်သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင် upload ။ အကြှနျုပျတို့သညျကိုမြန်နိုင်သကဲ့သို့သင်တို့ကိုနေရာချပေးဖို့ရှေ့ဆက်ရွေ့လျားနေကြသည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အနေဖြင့်အဘယ်သူမျှမကိစ္စလည်းမရှိ အမှန်တကယ်အလုပ်ရှာနေ။ ယခုအချိန်တွင်ဆော်ဒီအာရေဗျအဆိုပါကျွမ်းကျင်သူများအပေါငျးတို့သကွာခွင့်ရှိပါသည်။ သငျသညျရှာဖွေနေမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလွန်စိတ်ဝင်စားအလုပ်အကိုင်များအခွင့်အလမ်းများကိုများအတွက်။ သင်ကအခမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင့်သင်၏ပရိုဖိုင်မှတ်ပုံတင်ရန်ရသင့်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအလုပ်ရှာဖွေသူများကိုယူပြီး။ ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုကိုယ်စားလှယ်များဒူဘိုင်း၌သင်တို့၏အလုပ်ရှာဖွေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီရန်ပျော်ရွှင်ထက်ပိုပါတယ်။
ငါ့နာမကိုဂျိမ်းစ်သည်နှင့်ငါဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ၏ CEO ဖြစ်သူမိပါတယ်။
အခုတော့ငါ့ကိုအလုပ်ရှာဖွေမှသာအချုပ်အခြာဖြစ်၏သင်သည်ငါ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမိတ်ဆက်ကြကုန်အံ့။ သင်တို့သည်လည်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါလိမ့်မယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်မှာကမ္ဘာတဝှမ်းရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အလုပ်ရှင်များအားဖြင့်, ငါသည်သင်ထင်လျှင်သင်ရှိသည်မဟာဗျူဟာကဒီတစ်ဖွဲ့လုံးအသစ်ကအဆင့်မှာကောင်းသောဖြစ်ပါသည်သောသင်ကတိပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်ပင်တစ်ဝက်အဖြစ်ဤအစီအစဉ်မှတဆင့်သွားပြီတော့သူကကြွင်းသောလူပြုကြလျှင်, ငါ့ကိုယုံကြည် သငျသညျအလွန်သဘောကျပြီးဖြစ်တာပေါ့။
OK ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံသည့်စနစ်ကအခြေခံအထုပ်အဘို့ကိုသာ $ 4.99 တစ်ဦးငွေ outlay င်သောပါဝင်သည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းတဝိုက်အဓိကမြို့ကြီးများအတွက်ရှာဖွေနေအလုပ်နှင့်တူသောငါသည်ဤသငျသညျအစဉျအမွဲလုပ်ဖူးတဲ့အကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏အစီအစဉ်ကိုပူးပေါင်းပါလိမ့်မယ် အကယ်. ရှိသည်လိမ့်မယ်တစ်ခုတည်းသောပြဿနာငါခြောက်လတစ်လအကြာသင်တို့ကိုခေါ်ပြီးတော့သင်က sign up ကိုမပြုခဲ့သည်။
ငါ၏စစ်မှန်တဲ့အလှအပ၏ဤတစျခုပွောဆိုကွကုနျအံ့ဆိုလို အစီအစဉ်ကိုအစီအစဉ်ကိုအမှန်တကယ်အဘယ်သူမျှမပြန်အမ်းငွေအာမခံချက်နှင့်တကွကြွလာခြင်းဖြစ်သည်, သို့သော်သင် program ကိုဖြတ်သန်းသွားကအလုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေသင်သည်အစဉ်အလုပ်ပြီးပြီရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်သည်မထင်ကြပါလျှင် ပြီးနောက်သင်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရနိုင် !.
ယူအေအီးအလုပ်ဈေးကွက်အပေါ်အခြေခံပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မရဲ့ client များအတွက်အကြံပြုအထုပ်ပရီမီယံဖြစ်ပါတယ်။ ကြှနျတေျာ့ဖောက်သည်များ၏အများစုနေတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအတှေ့အကွုံရှိခြင်းနှင့်သင်တစ်ဦးကို Global Market က hit နိုင်ပါတယ်ဥပမာ - JP Morgan ၏ VP နှင့် Manpower ၏စီအီးအိုကိုကျွန်ုပ်အကြံပေးလိုပါသည် ဒူဘိုင်းတွင်စုဆောင်းမှု.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျအလုပ်ရှာဖွေအတွက်အပြည့်အဝထောက်ခံမှုရကြလိမ့်မည်, ငါအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုဖြစ်ပါသည်:
✔Myအဖွဲ့ရှာဖွေနေပါလိမ့်မည် ယူအေအီး၌သင်တို့အဘို့အအလုပ်တစ်ခုများအတွက် နှင့်ကာတာနိုင်ငံကိုသင်မေတ္တာရပ်ခံလျှင်။
✔Theyလည်းသင်၏ CV နှင့်အတူဦးခေါင်း-မုဆိုးနှင့်ရှာဖွေစုဆောင်းဆက်သွယ်စီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မယ်။
သူတို့သည်သင်၏ CV ကိုပို့ခင်✔Myအဖွဲ့လည်းဒါကြှနျုပျတို့ပွုကုမ္ပဏီများအရာကြွင်းလေကဲ့သို့သူတို့ကို spam ပါဘူးအလုပ်ရှင်များမှမခေါ်ပါလိမ့်မယ် !.
✔Our HR ဒါရိုက်တာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသင်တိုင်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်စာလုံးပေါင်းမှန်ကန်များမှာရှိသေချာစေရန်သင်၏ CV နှင့် cover letter ကိုကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။
✔Weကိုလည်းရန်သင့်အား add Bayt.com နှင့်ပင်လယ်ကွေ့ Talent: တူသောနိုင်ငံတကာဒေတာဘေ့စ
✔Weလည်း2သို့မဟုတ်3လအတွင်း '' အချိန်အတွင်းမှာသင်တို့အဘို့အလုပ်ရှင်များနှင့်အတူတစ်လလျှင်အနည်းဆုံး 2-3 အင်တာဗျူးများကို set up ။
အသစ်တစ်ခုကိုအလုပ်အဘို့သင့်ဗီဇာ, လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးသို့မဟုတ်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်စာရွက်စာတမ်းများအဘို့ process ကို✔Managing။
✔Inကိစ္စတွင်ကျွန်တော်တို့ဟာလိမ့်မည်လိုအပ်ပါတယ်ဖြစ်ပါသည် သငျသညျအလုပ်ရှာဖွေနဲ့အတူမျှော်လင့်ထားသောအရာကိုဆင်းအခြေချရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးတန်းမန်နေဂျာနှင့်အတူ WhatsApp ကိုသို့မဟုတ် Skype ကိုကျော်အင်တာဗျူးလုပ်ပါ။
✔Youတစ်ဦးချုပ်လုပ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် application ကိုရပါလိမ့်မယ်နှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်း၌သင်တို့၏ပြိုင်ဆိုင်မှုအထက်တွင်သင်ဦးခေါင်းနှင့်ပခုံးကိုသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။
✔Ourအဖွဲ့အားလုံးအလုပ်အကိုင်များမှလူကြီးမင်း၏ CV ကိုစလှေတျမညျငါတို့သည်သင်တို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွေ့အကြုံကိုအတွင်းသင်တန်း၏ website တွင်ရှိသည်ပေးထားပါတယ်။
သူတို့အညီသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်✔Weအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာထိပ်တန်း Headhunters မှလူကြီးမင်း၏ CV ကိုပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ်တယ်အပေါ်✔Yourပရိုဖိုင်းကို Highlighted options များနှင့်အတူပရီမီယံဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် အသစ်သောအဘို့နှင့်အလုပ်ရှင်များတည်ရှိ.
ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်မသင်တို့အဘို့စီမံခန့်ခွဲရှိနိုင်ပါသည်အလုပ်အကိုင်အများအပြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှ CEO ဖြစ်သူရဲ့သန်းကြွယ်သူဌေးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်, ဥပမာပြီ
Goldman Sachs နဲ့ DFC မှာအကြီးတန်းမန်နေဂျာ Careers
: Echo Alexa စီမံကိနျးအတှကျအမေဇုံအိုင်တီစျေးကွက်ဒါရိုက်တာ
ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်အစိုးရနှင့် Business စီမံကိန်းများအတွက်အသိဉာဏ်အထူးကု
အိန္ဒိယအတွက် Cryptocurrency လဲလှယ်စျေးကွက်အတွက်စီအီးအိုအဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း Build!
ယူအေအီးအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများထဲတွင်နေရာ HR မန်နေဂျာများ
သငျသညျချင်ပါတယ်လျှင်ငါ့ကိုသိပါစေ ကျနော်တို့အမြဲဖုန်းကျော်ကစကားပွောနိုငျကြိုးစားကြ ငါသို့မဟုတ်ငါ၏အမန်နေဂျာသင်အမြဲဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခု ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်များအတွက်ကောင်းသောလမ်းညွှန်ပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူယခုသင်ကသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်လမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရရှိနိုင်သည်။